महँगा आइफोन-१२ प्रो र प्रो म्याक्समा के छन् फिचर? :: Setopati
महँगा आइफोन-१२ प्रो र प्रो म्याक्समा के छन् फिचर?
सेतोपाटी संवाददाता असोज २८
आइफोन-१२ प्रो/प्रो म्याक्स
मंगलबार भएको भर्चुअल कार्यक्रममा एप्पलले आइफोन १२ का मोडलहरू सार्वजनिक गरेको छ।
आइफोन-१२ मिनी, आइफोन-१२, आइफोन-१२ प्रो र आइफोन-१२ प्रो म्याक्स गरी चारवटा मोडल आइफोनका अहिलेसम्मकै ठूला उपकरणमध्ये मानिएको छ।
यी सबै मोडलमा ५ जी नेटवर्कको सुविधा छ जुन आइफोनमा पहिलो पटक आएको हो। यसमध्ये आइफोन-१२ मिनी हाल बजारमा सस्तो प्रिमियम ५जी फोन बन्न सफल भएको सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्।
यहाँ हामीले आइफोन-१२ प्रो र आइफोन-१२ प्रो म्याक्सको कुरा गरेका छौं।
यी दुई स्मार्टफोन स्टेनलेस स्टिल ब्यान्डले बनेको छ र चार भिन्न रङमा उपलब्ध छ– निलो, खैरो, सिल्भर र पहेँलो।
१.६ अपर्चरको साथ सात एलिमेन्ट लेन्स वाइड क्यामरा रहेको यो मोडलले फोटो र भिडिओमा आउने कम उज्यालोको समस्या सुधारेको छ।
क्यामरामा नाइट मोड र अल्ट्रावाइड जस्ता नयाँ फिचर थपिएको छ। यसले अँध्यारोमा पनि फ्ल्यास बिनै उज्यालो फोटो खिच्न सकिन्छ।
क्यामरामा रहेको नयाँ टेलिफोटो लेन्सले फोटो चार गुना बढी नजिक जुम गरेर खिच्न सकिन्छ।
यो फोन यी १२८ जिबी, २५६ जिबी र ५१२ जिबी स्टोरेजका साथ आउनेछ।
यसमा रहेको ५जी नेटवर्क सुविधामार्फत प्रयोगकर्ताले भिडिओहरू छिटो डाउनलोड र अपलोड गर्न सक्नेछन्। उच्च गुणस्तरको भिडिओ हेर्न सक्ने, गेम खेल्न अझ सहज हुने, हाइ डेफिनेसन फेसटाइम जस्ता सुधार पनि यसमा समेटिएको छ।
यो आइफोन 'सेरामिक शिल्ड' प्रविधिको ग्लास प्रयोग गरेर बनाइएको हो। त्यसैले यो अन्य स्मार्टफोन भन्दा चार गुणा बलियो हुने कम्पनीको दावी छ।
आइफोन-१२ प्रोको अर्को विशेषता भनेको यो वाटरप्रुफ छ। ६ मिटर गहिरो पानीमा करिब ३० मिनेटसम्म डुब्दा पनि फोन नबिग्रिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। कफी, सोडा वा अरू पेय पदार्थ पोखिए पनि फोनमा कुनै असर नपर्ने कम्पनीको भनाइ छ।
यो मोडलमा स्मार्ट डाटा मोड फिचर पनि छ जसले मोबाइल डाटाको उपयोग, गति र समय सन्तुलन गरेर ब्याट्रीको पावर चाँडै घट्न दिँदैन।
आइफोन १२ प्रोका मोडलमा प्रयोग हुने चार्जरका लागि एप्पलले विशेष ध्यान दिएको छ। चाँडो र सुरक्षित चार्जिङको लागि आइफोनमा पहिलो पटक 'म्यागसेफ' प्रविधि प्रयोग भएको छ। आइफोन र एप्पल घडीको लागि म्यागसेफ चार्जर र म्यागसेफ डुओ चार्जर समावेश गरिएको छ।
आइफोन १२-प्रो म्याक्स
आइफोन १२-प्रो म्याक्स ६.७ इन्च डिस्प्लेको साथ आउने छ। यो हालसम्मकै ठूलो आइफोन हो। यो मोडलले सबैभन्दा उच्च रिजोलुसन दिने बताइएको छ।
यसमा पनि तीन वटा क्यामरा छन् जसका फिचर आइफोन १२ प्रोकै जस्ता छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः आइफोन-१२ सिरिजका चार फोन सार्वजनिक, २० गिगाबाइटको सिनेमा मात्र ४५ सेकेन्डमा डाउनलोड हुने
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २८, २०७७, ०२:५७:००
'डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ' शनिबार हुँदै
कम्प्युटरजस्तै काम गर्न सक्ने सामसङका यी फोन
राउटर युपिएस वा एडेप्टर प्रयोग गर्न टेलिकमको आग्रह